होशियार ! चार्जमा राखेको मोवाइलमा गेम खेल्दा वालकको मृत्यु
चार्जमा राखेको मोवाइल खेल्दा बुधबार एकजनको मृत्यु भएको छ । मोरङको लेटाङ नगरपालिका– ३ त्रिशुली चोकका १५ वर्षिय सौजन राईको मृत्यु भएको हो । मोवाइल चार्जमा राखेर गेम खेलिरहेको अवस्थामा बुधबार मध्यरातमा उनलाई करेन्ट लागेको थियो । सौजन बुधबार राति साथी सुरज राईको घरमा सुत्न गएका थिए । दुबैजना एउटै...
क्यापिटल वान ह्याकिङमा १० करोड ६०को सूचना चोरी
अमेरिकामा वित्तीय सेवा दिने अग्रणी फर्म क्यापिटल वानलाई निशाना बनाएर गरिएको ह्याकिङमा १० करोड ६० लाख मानिसको सूचना चोरी भएको छ । यसमा अधिकांश अमेरिका र क्यानडाबासी छन् । क्यापिटल वानकाअनुसार चोरी भएको डाटामा नाम, ठेगाना, फोन नम्बर छन् । तर ह्याकर क्रेडिट कार्ड नम्बरसम्म...
5G कनेक्टिभिटीका तीन आईफोन आउनेछन्
एप्पलले सन् २०२० मा तीनवटा फाइभजी आईफोन ल्याउने भएको छ । कम्पनीले आफ्नो क्वालकोमसँगको विवाद सुल्झाएको छ । बजार विश्लेषकका अनुसार सन् २०२० मा एप्पलले आफ्ना तीनओटा आईफोन फाइभजी कनेक्टिभिटीको साथमा सार्वजनिक गर्नेछ । तर, यसअघि सार्वजनिक भएको एक प्रतिवेदनले भने आगामी वर्ष सार्वजनिक हुने ३ मध्ये आईफोनमा...
आयो ब्याट्रीले चल्ने अनौठो साईकल
पडराईड चार चक्का भएको इलेक्ट्रीक असिस्ट साईकल हो । यसलाई फेब्रिकको सेलले कभर गरिएको छ, जसलाई हेर्दा सानो कार जस्तै देखिने छ । उक्त साईकलले चालकलाई सबै किसिमको वातावरणिय जोखिमबाट जोगाउँछ । यसमा जडान गरिएको २५० वाटको इलेक्ट्रीक मोटरले २५ किलोमिटर प्रति घण्टाको स्पीडले साईकललाई चलाउँछ । यसमा प्रयोग भएको...
काठमाण्डौ । यदि तपाईं यूट्यूबमा भिडियो हेर्न मन पराउनुहुन्छ भने तपाईको यही सौखलाई उपयोग गरेर प्रत्येक महिना ४० हजार रुपैयाँ भन्दा बढी पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ । यो काम गर्न तपाईंसँग मात्र दुई चिज हुन आवश्यक छ । पहिलो, इन्टरनेट कनेक्सन र दोश्रो चिज हो दैनिक भिडियो हे ...
प्रहरीको काम सामाजिक सञ्जालका स्टाटसमाथि अनुसन्धान गर्ने मात्रै हुँदैन । कतिपय घटनामा सामान्य विषयमा अनावश्यक हात लागेको भनेर आलोचना पनि हुने गर्छ । त्यसैले प्रहरीले सामान्य किसिमका घटनासँग जोडिएको विषयलाई सर्वप्रथम सामाजिक सञ्जालबाटै सोधपुछ गर्न थालेको छ । प्रहरीको साइबर अपराध ब्युरो (सीसीबी) का प्रमुख विकास श्रेष्ठ कतिपय अवस्थामा सम्पर्कभन्दा...
काठमाडौँ । फोन उठाउने बित्तिकै पहिलो शव्द हुन्छ : हेल्लो । त्यसपछि मात्र फोन गर्ने मानिससँग बाँकी कुराकानी हुन्छ । आखिर फोनमा किन र कसरी हेल्लो भन्ने चलन आयो होला ? यो सबैको चासोको विषय हुन सक्दछ । यस विषयमा अनेक प्रकारका दाबीहरु छन् । तर त्यसमध्ये एउटा भरपर्दो तथ्य...
स्मार्ट पार्किङ प्रयोगका लागि गुगल प्ले स्टोरमा गएर ‘पार्क केटिएम’ एप डाउनलोड गर्न सकिने न्युरोडमा स्मार्ट पार्किङ सुरु हुने भएको छ । अव्यवस्थित पार्किङले समस्या बढाएको बताउदै काठमाडौं महानगरपालिकाले स्मार्ट पार्किङ सिस्टम सञ्चालन गर्नलागेको हो । सुरुमा न्युरोड क्षेत्रका पाँच स्थानमा सञ्चालन गर्ने तयारी छ । कम्पनीका आइटी को–अर्डिनेटर हरीष...
फेसबुकले ६ महिनाको अवधिमा ३ अर्ब भन्दा धेरै फेसबुक अकाउन्ट बन्द गरिदिएको छ । सन् २०१८ को अक्टोबर महिनादेखि सन् २०१९ को मार्च महिनासम्मको अवधिमा फेसबुकले यतिधेरै संख्याका अकाउन्ट हटाएको हो । त्यसमध्ये १ अर्ब २० करोड अकाउन्ट सन् २०१८ को चौथो त्रैमासिकमा र २ अर्ब १९ करोड अकाउन्ट सन्...
सुत्नेबेला मोबाइल चलाउनु मानिसक स्वास्थ्यका लागि धेरै हानिकारक हुने तथ्य बाहिरिएको छ । करिब १ लाख मानिसहरुमा गरिएको सर्वेक्षणपछि उक्त तथ्य सार्वजनिक भएको हो । राति सुत्नेबेला मोबाइल चलाउनु मानिसक स्वास्थ्यका लागि धेरै हानिकारक हुने पत्ता लगाइएको समाचार संस्था इन्डिपेन्डेन्टले उल्लेख गरेको छ । यसअघि पनि आरामपूर्ण निद्रा पुर्याउन सुत्ने...